BAOLINA KITRA – “CAN 2019” :: Nokitikitihan’ny CAF i Afrika Atsimo • AoRaha
BAOLINA KITRA – “CAN 2019” Nokitikitihan’ny CAF i Afrika Atsimo
Taorian’ny nanesorana tamin’i Caméroun ny fampiantranoana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019 dia manomboka mitady firenena hafa homena izany ny Kaonfederasiona afrikanina ho an’ny taranja baolina kitra (CAF). Isan’ireo nokitikitihan’ity rafitra afrikanina ity ny Federasionan’i Afrika Atsimo.
Tamin’ny alahady lasa teo no voalazan’ny Federasiona afrikanina tatsimo fa “noresahan’ny CAF” izy ireo handray an’ity fifaninanana ity. “Mila miresaka amin’ny governemanta izahay vao afaka mamaly izany fiangavian’ ny CAF izany. Tsy afaka ny hangataka fanampiana amin’izy ireo ihany koa izahay satria mandalo fotoan-tsarotra ny fiainana ara-tsôsialy aty aminay ankehitriny. Mety ho sarotra ny haneken’ny governemanta izany”, hoy i Russel Paul, filoha lefitry ny Federasiona afrikanina tatsimo ho an’ny baolina kitra (SAFA).
Raha toa ka manaiky an’izany soson-kevitry ny CAF izany ny governemanta any an-toerana dia heverina fa fahadisoam-panantenana no mahazo an’i Maraoka, izay efa naniry mafy ny hampiantrano izany, taorian’ny faha-sahiranana teo amin’i Caméroun.
Karate Hiatrika ady any Tiorkia ny mpi- katroka tanora
Haiady aikido Tanjona ny hiakaran’ny haavo teknikan’ny mpikatroka
Basket- ball N1A lahy/vavy Manjakazaka any Antsiranana ny GNBC sy MB2All
Kitra – THB champions league Nitrangana famelezana mpitsara ny lalaon’ ny AS Adema sy FCA Ilakaka
BAOLINA KITRA – CAN 2019 :: Nahatafita an’i Ghana sy Kenya ny sazy azon’i Sierra Leone
BAOLINA KITRA – AFRIKANINA :: Ho fantatra anio ny ho avin’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport